रवि लामिछाने पक्राउ काण्डः भीडले कानुनलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने हो भने किन चाहियो कानुन? - Everest Dainik - News from Nepal
रवि लामिछाने पक्राउ काण्डः भीडले कानुनलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने हो भने किन चाहियो कानुन?
नवराज सापकोटाः भीडले कानुनलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने हो भने कानुन किन चाहियो ? प्रहरी प्रशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका किन चाहियो ? संसदमा वहुमत र अल्पमत किन चाहियो ? एकमना भनिएको सरकार किन चाहियो ?
खेम भण्डारी र सुरेन्द्र भण्डारीलाई प्रहरी प्रशासन सुम्पी दिए भयो । गोविन्द केसी र सुरेन्द्र केसीलाई संवैधानिक अंगहरु सुम्पी दिए भयो । ज्ञानेन्द्र शाही र ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्य व्यवस्था सुम्पी दिए भयो ।
हरेक क्षेत्रमा वितण्डा मच्चाइएको छ; छानविनमा वितण्डा, प्रस्तावित विधेयकहरुमा वितण्डा, प्रेसमा वितण्डा, वौद्धिक क्षेत्रमा वितण्डा, आदि अनेक क्षेत्रमा नियोजित वितण्डा । के लोकतन्त्र र गणतन्त्र यसैका लागि हो र ?
नागरिक अराजकताको स्थिति सृजना गरेर राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन खोज्नेहरुको एक पछि अर्को षडयन्त्रमा देशलाई धकेलिँदै छ । सत्तासीन नेताहरु पदका लागि लुछाचुडी गर्न छाडेर यथाशिघ्र: एकजुट हुनुु पर्ने देखियो ।